‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’ - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’
किसानलागि शासकविरुद्ध संघर्ष गर्दागर्दै रेटिन पुगेका पन्तको मागहरु अझै उपेक्षित
काठमाडौं, १८ साउन। यतिखेर दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार ‘विराजमान’ छ। त्यही सरकार सञ्चालन गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष समेत छन्। तर ६७ वर्ष पहिले किसानको हकहितमा आन्दोलनमा तत्कालिन शासक वर्गबाट हत्या गरिएका शहिद भीमदत्त पन्तको स्मृति दिवसमा एउटा विज्ञप्ती मात्रै निकाल्छ
अखिल नेपाल किसान महासंघले पन्तको ६७ औं स्मृति दिवस भनेर मनायो तर शहिद भीमदत्त स्मृति प्रतिष्ठानले पन्तको ६८औँ स्मृति दिवस भनेर मनायो। समान्य मितिमा समेत ख्याल गर्न नसक्ने नेताहरुले उनको सपना पुरा गर्नु त परै आवस ठूलो दबाबपछि वल्लतल्ल ०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली सरकारले पन्तलाई शहिद घोषणा गरेको हो।
उनले रोपेको किसान आन्दोलनको बीउ अझै उम्रेको छैन? उनैले स्थापित गरेका थुप्रै नाराहरु अहिले पनि लाग्छन् तर किसानको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। २०१० सालमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका धानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले साउन १७ गते किसान योद्धा भीमदत्त पन्तको हत्या गरी १८ गते उनको टाउको बाँसको लिंगोमा झुन्ड्याइयो । राणा विरोधी आन्दोलनमा भारत मेट्रिक पास गरेर फर्केका पन्त सुरुका दिनमा काग्रेसी राजनीतिमा रमाएका थिए। तर काग्रेस त्यागेर कम्युनिष्टमा प्रवेस गरेका थिए।
‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’ भन्ने उनको नारा हिजोआज पनि उत्तीक्कै दमदार लाग्छ। जोताहा किसानका पक्षमा वकालत गरेका भीमदत्त पन्त १९८३ मंसिर १० गते डडेल्धुराको कारीगाउँमा जन्मेका हुन्।
त्यस्तै ‘जसको जोत उसको पोत, किसान जिन्दावाद, जनताको राज जिन्दावाद’, ‘ठालु खाना आलु, गरिब खाना बासमती’, शोषक सामन्त मुर्दावाद, किसान राज जिन्दावाद’, ‘तमसुक च्यात भकारी फोड’ अभियान चलाएका पन्त नेपाली किसान आन्दोलनको गाथामा शिखर पुरुष झै मानिन्छ। तर, उनले उठाएका मुद्दा सरकारले अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेका छैनन्।
जनताका लागि शासकविरुद्ध संघर्ष गर्दागर्दै रेटिन पुगेका पन्तले उठाएका कैयौ मागहरु अझै उपेक्षित छन्।
भीमदत्त पन्तको इतिहास
ब्राम्हण, ठकुरी र क्षेत्रीहरुलाई दलितको भान्सामा खाना खान लगाएपछि तत्कालिन सामाजिक संरचनाले उनको अभियानलाई पचालउन सकेन। सहिद पन्तको व्यवहारबाट कुँडिएका ठालु र सामन्तहरु उनलाई आतंककारी भन्दै राज्यले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै चलखेल गर्न थाले । सहिद पन्तले कसरी आन्दोलनको शुरुवात गरे ?
नेपालगञ्ज पुगाएपछि उनले भागेर ज्यान बचाए । त्यसपछि उनी कञ्चनपुर आए । आन्दोलनको विपक्षमा रहेका धेरै जनालाई महाकालीमा फाले। उनले घरमा पनि बुबासँग भएका तमसुक जलाइदिए । डडेल्धुराका तत्कालिन बडाहाकिम मोहनबहादुर सिंहलाई हटाएर आफू बडाहाकिम बने । क्रान्तिमा सहयोग गर्नेहरूलाई कर्मचारी बनाए । उनले चार महिनासम्म डडेल्धुरामा बसेर समानान्तर सरकार बनाउदै शासन चलाए ।
दुवै छोराको मृत्युपछि जीवनसाथी पार्वती पन्तको आग्रहमा महता क्षेत्रीकी छोरीसित उनले अर्को विवाह गरेका थिए । कान्छी श्रीमतीबाट छोरी जन्मिइन् । ७÷८ वर्षकै उमेरमा उनको पनि मृत्यु भयो। पन्तका विरोधी र पारिवारिक समस्या बढ्दै गए तर क्रान्तिबाट विचलित भएनन् । उनले गरिबको पक्षमा बोलेको र दलितको घरमा खाएको तत्कालिन समाजमा कसैलाई पनि मन परेको थिएन ।
टाउको प्रदर्शनीमा राखिएको तीन दिनपछि पन्त पत्नी पार्वतीदेवी र भाइ धर्मदेव पन्तलगायतका आफन्त उनको शव माग्न सदरमुकाम खलंगा पुगेका थिए । बडाहाकिम मोहनबहादुर सिंहसँग भेट गरी अन्त्येष्टि गर्न शव माग्दा उल्टै हप्की खानु परेको सहिद पन्तका भतिज प्रदिप पन्त बताउछँन ।
पछिल्लो समयमा विशेषगरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहले भीमदत्त पन्तलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा धेरै पटक मुलुकमा सरकार बने । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले नै उनलाई शहीद घोषणा पनि ग¥यो । अपितु, उनका मुद्दाको सम्बोधन भने कसैले पनि गरेनन् । इतिहासका कुरा उनको जीवनमा आधारित .halokhabar/from
Prevजाह्रवी स्टारर ‘गुञ्जन सक्सेना’ ट्रेलर रिलिज
Nextकोरोना, कम्युनिष्ट र कलह